Hay’adaha ammaanka Uganda oo heegan la galiyay – Radio Muqdisho
Hay’adaha ammaanka Uganda oo heegan la galiyay
Ciidanka booliska waddanka Uganda ayaa heegan la galiyay si looga hortago weerar argagixiso oo ay kooxda Al-Shabaab ka fuliso waddankaas. Kaddib markii 148 qof ay ku dhinteen weerar ay kooxdu ku qaadday jaamacadda magaalada Gaarisa.
Gen. Kale Kayihura, oo ka tirsan booliska Uganda ayaa wariyeyaasha u sheegay in ay heleen xog sheegeysa in kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab ay qorsheynayaan inay weeraraan goobaha waxbarashada ee magaalada Kampala.
Sarkaalkaan ayaa u soo jeediyay maamuleyaasha goobaha waxbarashada inay si aad ah ammaanka u adkeeyaan, ayadoo si la mid ah loo howl galiyay saldhiga boliska ee ku dhow xarumaha waxbarasho si looga hortago isku dayga argagixisada.
Ciidanka booliska ayaa howl gallo joogto ah wada, ayagoo la socda ammaanka goobaha ganacsiga, hoteellada, goobaha cibaadada, suuqyada iyo goobaha baabuurta laga raaco, dhammaan xarumahaan ayaa ayaguna dhaqan galinaya talooyinka adkeynta ammaanka ku saabsan ee ay dowladdu soo jeedisay sida uu sheegay Gen. Kayihura.
Dadka shacabka ah ayaa loogu baaqay inay la shaqeeyaan hay’adaha ammaanka isla markaana ay ka warqabaan dhaqdhaqaaqyada laga shakin karo ee ay arkaan isla marnaa ay la soo xiriiraan booliska.
Kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab ayaa khamiistii weerartay jaamacad ku taalla magaalada Gaarisa halkaas oo ay ku dileen 148 qof, sidoo kale waxaa ku dhaawacmay dad badan. Dadka ay waxyeelladu soo gaartay waxaa u badnaa ardaydii jaamacadda wax ka baranaysay. Weerarro noocaan ah ay kooxdani ka fulisay dalalka gobolka sida Soomaaliya, Kenya iyo Uganda.